EPL: Man United oo guul ka soo gaaray kooxda Swansea City oo booqatay, xilli Ibrahimovic uu labo gool dhaliyey… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Man United oo guul ka soo gaaray kooxda Swansea City oo booqatay, xilli Ibrahimovic uu labo gool dhaliyey… + SAWIRRO
(Swansea) 06 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Man United ayaa guul 3-1 kasoo gaartay Swansea City oo ay booqatay kulan ka tirsan horyaalka Premier League, iyadoo labo jeer uu shabaqa soo taabtay Zlatan Ibrahimovic.
Man United ayaa natiijada ciyaarta dhinac u riday kaddib markii ay saddex gool dhalisay qeybta hore ee ciyaarta, waxaana goolka koowaad u dhaliyey 15’daqiiqo Paul Pogba, kaddib kubbad uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa.
Zlatan Ibrahimovic ayaa labo gool raacsaday kuwaasoo uu kala dhaliyey daqiiqadihii 21’aad iyo 33’aad, sidaas ayaana lagu kala nastay 3-0 oo ay ku gacan sarreysay Man United.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Swansea City ayaa hal gool iska soo guday, waxaana madax ugu dhaliyey 69’daqiiqo Mike van der Hoorn, laakiin goolkaasi guuldarro kama badbaadin Swansea, waxaana Man United ay ku adkaatay 3-1.
Man United ayaa booska 6-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League fadhisa iyadoo leh 18-dhibcood.
DEG DEG: Ronaldo oo heshiis waqti dheer ah qalinka ugu duugay Real Madrid